Ankolafy Zafy Albert : tsy mieritreritra ny hiditra ao anaty tetezamita – MyDago.com aime Madagascar
Ankolafy Zafy Albert : tsy mieritreritra ny hiditra ao anaty tetezamita
Nitondra fanazavana tamin’ny mpanao gazety ny maraina teo tetsy amin’ny villa Elisabeth ny Ankolafy Zafy Albert. Nitarika valandresaka ny lehiben’ny delegasiona Andriamatoa Miandrisoa Marcel, niaraka tamin’ireo mpikambana rehetra na avy eto an-toerana na avy any amin’ny faritra. Mbola namafisiny Miandrosoa Marcel fa tokana ny Ankolafy Zafy, dia izay tarihin’ny Pr Zafy Albert ihany. Nisy hoy izy ny taratasy nalefan’ny Ankolafy tany amin’ny fiadidiana ny tetezamita ka novalian’izy ireo izany, izay milaza fa ny taratasy misy ny sonian’ny Pr Zafy ihany no ekena indrindra amin’ny fanolorana lisitra. Ankoatra izay dia nambaran’ny Ankolafy Zafy fa voahitsakitsaka ny tondrozotra. Efa hatrany amin’ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin’ny governemanta Beriziky no tsy voahaja izany. Noho izany hoy izy dia tsy miditra amin’ny tetezamita ny Ankolafy Zafy raha tsy hajaina ny tondrozotra, ary misy ihany koa ny fifandanjan’ny fahefana. Tsy toerana hoy izy ireo no mahamaika ny Ankolafy fa ny fanajana ny vahoaka Malagasy, ary tsy manaiky ny fitapitaka. Tsy manaiky ny CENIT ihany koa ny Ankolafy Zafy satria ireo olona mpikambana sasany ao dia efa nanao ny fitsapa-kevi-bahoaka. Tsy manaiky ny HCC. Ho an’ny Ankolafy Zafy dia ny diniky ny samy Malagasy no hitondra vahaolana eto amin’ny firenena.
Rodoben’ny Pr Zafy Albert : « Tetezamita madio tsy misy mpangalatra no hatsangana eto » – 07 mai 11
Manadio tena ny ankolafy Zafy Albert.
Ankolafy Zafy Albert : tsy mivaky ny ankolafy telo
11 réflexions sur « Ankolafy Zafy Albert : tsy mieritreritra ny hiditra ao anaty tetezamita »
15 mai 2012 à 19 h 57 min
Misaotra Tompoko ! Mazava ny aminareo izany ! Fa ahoana kosa ny amin’ny Vondrona hiraisan’ny Mouvance roa ?
Mbola samy amin’ny hoe « Samy mandeha samy mitady » ve sa hisy amin’izay ny atao hoe « Solidarite ???!
15 mai 2012 à 19 h 59 min
Ahoana ny amin’Atoa Beriziky ??? Mbola mijanona ao main’ny rafitra HAT ve izy sa mihevitra ny mbola hijanona ao ?
15 mai 2012 à 20 h 55 min
Ratsy zany raha sipa sanina an! Ny molony sy ny tanany moa aminizany dia genda be.
15 mai 2012 à 21 h 07 min
K’aiza moa ity hatsaratarehinareo Rasamy a!!hi!hi!hi!!!
ilay tanany azo akaiky no nahangeza azy raha mandinika tsara ianao,
fa iza anefa io aloha ???ny ahy ny olona hitako tena ratsy eto ambonin’ity tany ity dia i zanakisoa sy sarkô,
tsy vitan’izay ratsy fotsiny fa hatr@ FANAHINY dia tsy misy hilana azy, @’izay dia manao tsinona2 olona ery.
Raha tsy nisy ireo DEVOLY VELONA ireo ii demelina efa mba NATSINTSIANA ,ireo no tena rangory fototry
15 mai 2012 à 21 h 12 min
Aza miditsa lalina!!!aza midikiditra @ fiainan’ny olona!!
Izay hifanosehany any!!beriziky efa tsy Zafy intsony, efa naloany toa ireo rehefa mbola midongizina ao
@’io fitondram-poza io.
15 mai 2012 à 21 h 36 min
Mety ilay hevitra fa: »tsy hiditra ao @ tetezamita …….fa ny MAPMĖ dia izay
tafiditra dia naka toerana sy NAMIKOTRA fa ny tety ivelany no tsy niditra.
16 mai 2012 à 5 h 18 min
Nankaiza i Rakotovahiny membre tao,
tadidiko nanao pasy somary nanilika an’i dada8,
entin’ny fo loatra
ka lasa RERAKA ambony ihany!
Ny lehibenareo dadaZAFY dia fantatro fa mifanao ranoSYvary @ dadanay
androdana ny TSY VANIN-K’OLONA ISANY
Misaotra anao miteny @ alalan’ny ankolafy Zafy.
16 mai 2012 à 9 h 29 min
Zao no izy ry Njara sy ry HoAiza avy any Ambohitsagnagna. Asaivo miteny ofisialy Dadabeanareo Zafy, woe manohana sy mitolona ho an’ny fiverenan-dRaosy. Sanatria, tsy hanao izany izy, porofo, Zafy iny irery, no tsy nanaiky ny maha filoha ara-dalàna an-dRavalo nanomboka tamin’ny 2002 ka hatramin’ny 2008. Mba nanohana izay hetsika nataonareo ve na ny taloha na ireo vao haingana Zafy Albert? nataony tohatra fiakarana ianareo mouv Raosy mba haha crédible azy ho isan’ny mpanohitra matanjaka, fa tsy asian’ Zafy sira akory zay rainareo. Mba teneno ane Zafy, woe, tohananay ianao dadabe hiverina eo @ fitondrana, fa andao isika hilahatra eny Ambohitsorohitra, raha tsy izy mihitsy no lohalaharana eo e!
Mba mandiniha ry VENDRANA fa vao maika aza, mety hiteraka fahasahiranana ho an’ny fitondrana ny fidiran’ny Mouv Zafy ao @ mety ho blocage na any @ GVT na any @ parlement. Ary azo eritreretina tsara ny fisian’ny équilibre, raha samy niditra tao Zafy sy Deba, fa vao maika aza manome vahana be ny mpitondra ny tsy fidiran’ireo ao. De jereo, inona no vitanareo niditra ao? iza no tena tia seza? tsy ianareo? de ianareo ihany woa no problemanareo, impiry moa ny tenanay no hamerina izany?
Amboary tsara aloha ny fandaminana ao an-tokontranonareo, de manaova stratégie milay, fa raha ny adin-dry Mamy sy ry Hanitra ary ry Lavaraoby, fialana wain fotsiny, sady kilalaon-jaza, ary raha Zandry no henjehinareo kanefa any aminareo samy nareo no tsy mamokatra de manarak’aloka daholo ny sagnagna Raosy rainy, sy ny Sagnagna Raosy Zanany. Tsy ianao ry Njara tsy ampy tetika, no tokony hisaotra an’i Zafy, fa zahay mihitsy no misaotra azy tsy miditra ao mba tsy hanelingelina, sy mba tsy handany vola fotsiny. De mandiniha woa @ vava avoaka, fa tena maivana ianareo e! @ lafiny rehetra mihitsy io an! de inona indray no ho lazaina @ dian’ny Zandry any New-York ity? bye! bye ry DONTOBE ISANY ô!
ny tsy mazava amiko dia ny mouvansy ZAFY nanaiki nanao sonia io FR io tsy vitany io fotsiny fa mbola ny PM natolony no mitondra dia ny mahagaga izy indray no be vava tsy manaiky io FR nosoniaviny ny mouvansy RAVALO nanao sonia najainy izany fa VENDRANA sy OMER tsy manaraka ny FR nosoniaviny ka tokony FAT no miala tsy mitondra intsony ny tetezamita miandry no atao satria mazava manaraka FR dia miverina ny mouvance RAVALO
mahasolo dit :
21 mai 2012 à 20 h 57 min
ENY ARY,,,,!TONGA NY FOTOANA HILAZANA NY MARINA AMIN,AREO VAHOAKA MALAGASY TSY ANKANAVAKA,AVY ANY AVARATRA ,ATSIMO,ATSINANANA,ANREFANA.TSY MIVAKY VOLO SY MPITIA TANINDRAZANA,NY FANDROSOANA HOAN,NY TOE-KARENA SY NY FILAMINANA ;ENGA ANIE IANAREO ANISANY OLONA MANAM-PITIAVANA HOAN,NY TANINDRAZANY,INDRIRA NYFILAMINANA ARA
-POLITIKA,NOHO IZANY FALY MANOLOTRA HO AN,NY VAHOAKA MALAGASY MANONTOLO TSY AN-KANAVAKA IZAHAY SY NY MPANOLO- KEVITRA AKAIKY ARY NY MAMBRA NY ANTOKO (ANTOKO SOSIALISTA NY MADAGASCAR)DIA MANOLOTRA NY FIANTSOAM-BE AMIN,NY LAFINY FILAMINANA POLITIKA ETO AMIN,NYFIRENENA.NOHON,IZANY MIATSO NY PANAO POLITIKA REHETRA MIFANAJA, AZANONY NY ADY POLITIKA TSY ARA-DEMOKRASIA TOY NY FANOZONGOZONAM-PIRENENA,NY VAHOAKA MALAGASY IRERY IHANY NO TOMPON-DALANA SY MANAMPAKA NY FITONDRANA SY NY MPITONDRAN,NY FIRENENA MALAGASY VOAFIDYN,NY MALAGASY///NY FITONDRANA TSY VOAFIDIN?NY VAHOAKA ARA DEMOKRASIA DIA TSY MANANKERY EO IMASON,NY VAHOAKA MALAGASY TSY MIVAKY VOLO!SATRIA MADAGASCARA FIRENENANA MILA FANDROSOANA ARA DEMOKRASIA SY OLONA VAOVAO TIA TANINRAZANA AMPILAMINANA
Précédent Article précédent : Vondron’ny mpanohitra : « avereno amin’ny vahoaka ny kianjan’ny demokrasia »
Suivant Article suivant : Ankolafy Ravalomanana : « tsy hamadika ny tolona izahay mpitarika »